धनगढी । अखिल नेपाल युवक सङ्घ, कैलाली जिल्ला भेला २०७४ माघ २० गते वनभेडामा सम्पन्न भएको छ । युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा ७ नं. प्रदेशका इन्चार्ज प्रशान्त थापाको प्रमुख आतित्थ्यतामा सो भेला सम्पन्न भएको हो ।
भेलाको उद्घाटन तथा उद्घाटन मन्तव्य प्रमुख अतिथि प्रशान्त थापाले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । भेला सफलताको शुभकामना दिनेहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य नन्दराज भट्ट, अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य धनीराम आचार्य, अखिल नेपाल किसान सङ्घका हरिकृष्ण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा कैलालीका अध्यक्ष लछीराम आचार्य, युएई नेपाली एकता समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराज जैसी, अखिल (छैटौँ) का कैलालीका अध्यक्ष उमेश कँडेल लगायतका हुनु हुन्थ्यो । भेला अखिल नेपाल युवक सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष शिवराज रेग्मीको अध्यक्षता, कृष्ण विकको सञ्चालन र रामकृष्ण रेग्मीको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो ।
भेलाले कृष्ण विकको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय जिल्ला सङ्गठन समिति चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा मेरजन शाह, सचिवमा रामकृष्ण रेग्मी, सहसचिवमा नेत्र साउद र कोषाध्यक्षमा शिखा पाण्डे रहनु भएको छ । समितिको सदस्यहरूमा हर्क विक, झेली राना, धर्मराज जोशी र शेर बहादुर साहु रहनु भएको छ । समितिको दुई स्थान हाललाई रिक्त राखिएको छ । भेलाले २०७४ चैत्र २६ र २७ गते जिल्ला सम्मेलनका साथै फागुन ५देखि २० गतेसम्म गाउँ तथा नगर भेला सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्युठान । अखिल नेपाल युवक सङ्घ प्युठानको जिल्ला भेला २०७४ माघ २० गते खलङ्गामा सम्पन्न भएको छ । युवक सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार विदुर मल्लको प्रमुख आतिथ्यतामा सो भेला सम्पन्न भएको हो ।
भेलालाई युवक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जितामित्र सुनार, मुकुन्द राज रोका लगायतले शुभकामना दिनु भएको थियो । भेला युवक सङ्घ प्युठानका उपाध्यक्ष रोहणी राज पोखरेलको अध्यक्षता, बरुण ध्वज मल्लको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
भेलाले मुकुन्द राज रोकाको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय जिल्ला सङ्गठन समिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा कमल पौडेल, सचिवमा बरुण ध्वज मल्ल, सहसचिवमा मिनराज पुन र कोषाध्यक्षमा खगा राना रहनु भएको छ । त्यस्तै, सदस्यहरूमा अर्जुन विक, भरत मणि न्यौपाने, केशव खडका, कमल नेपाली, शालिक राम पुन मगर, जगत विक, कमल घर्ती, गीता सुनार, शिव श्रेष्ठ, निमान सिंह जिसी र नुम प्रसाद श्रेष्ठ रहनु भएको छ । भेलाले रोहणी राज पोखरेल, सुमन सुवेदी र धनबहादुर जिएमलाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ । समितिमा तीन सदस्यको स्थान हाललाई रिक्त राखिएको छ । भेलाले २०७५ वैशाख ७ र ८ गते जिल्ला सम्मेलन साथै फागुन महिनाभरिमा गाउँ तथा नगर भेला सम्पन्न गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
काठमाडौँ । युवक सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाको तेस्रो भेला २०७४ माघ १६ गते सम्पन्न भएको छ । भेलाको उद्घाटन प्रमुख अतिथि युवक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तिलक थापाले गर्नु भएको थियो ।
भेलाको अन्य अतिथिहरूमा सङ्घका केन्द्रीय सचिव तथा ३ नं. प्रदेश इञ्चार्ज रमेश पौडेल, अखिल (छैठौँ) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष रेशम कँडेल र शिक्षक सङ्गठनका काठमाडौँ संयोजक भोला ढकाल हुनु हुन्थ्यो । भेलामा भक्त विकको अध्यक्षता, कृष्णराज शर्माको सञ्चालन र विनोद फुयाँलको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो ।
भेलाले भक्त विक संयोजक रहेको १५ सदस्यीय काठमाडौँ जिल्ला सङ्गठन समिति चयन गरेको छ । सदस्यहरूमा भिम भट्टराई, अर्जुन शर्मा, विष्णु शर्मा, कृष्ण थापा, विनोद फुयाँल, अमृत आचार्य, सविना पौडेल, वृन्दा केसी, जीवराज बस्नेत, उज्ज्वल पौडेल, प्रशान्त चापागाई र विकास भुसाल रहनु भएको छ । समितिमा दुई जना सदस्यको स्थान हाललाई रिक्त राखिएको छ ।
भेलाले २०७४ चैत्र १७ गते तेस्रो काठमाडौँ जिल्ला सम्मेलनका साथै फागुन महिनाभरि नगर भेला तथा सदस्यता वितरणको कार्यक्रम तय गरेको छ ।